Akpụkpọ anụ ụlọ akpaaka
Akpụkpọ anụ Microfiber
Akpụkpọ anụ Suede
Akpụkpọ anụ PU
PVC Akpụkpọ anụ
Ụgbọ ala Mat
Ihe eji eme ala ụgbọ ala
Ụkwụ ụgbọ ala Mat
Ngwa oche oche
Ụkwụ oche ụgbọ ala
Ihe mkpuchi oche ụgbọ ala
Ụlọ ọrụ Henan Bensen Co., Ltd.
Guzosiri ike na 2012, Henan Bensen Industrial Co., Ltd. bụ onye nrụpụta ọkachamara na akpụkpọ anụ na ihe eji arụ ụlọ.
Site na ntọala nrụpụta abụọ na Shanghai na Kaifeng, ụlọ ọrụ anyị na -ekpuchi mpaghara mita 20000. Na Bensen na -ewe ihe karịrị ndị ọrụ 480; Ewezuga ahịrị mmepụta Microfiber abụọ, Anyị na -ebubatakwa ụfọdụ akụrụngwa nrụpụta ọkachamara. N'ịnabata ọnọdụ njikwa ọkọlọtọ, Anyị enwetara asambodo nke sistemụ njikwa mma ISO9001 na sistemụ njikwa gburugburu ISO 14000. Bensen na -emebe echiche mgbe niile maka imepụta uru ndị ahịa maka ndị ahịa ahaziri iji gboo mkpa nke ndị ahịa dị iche iche, ma na -enye ndị ahịa ihe ngwọta na nsogbu ọrụ aka. Nnyocha ọzọ na ihe ọhụrụ, na ọkaibe.
N'ime afọ 10 gara aga， bensen na -agbaso "ogo ngwaahịa ka ọ dịrị ndụ, ntụkwasị obi na ọrụ mmepe" ebumnuche azụmahịa. Ekpebisiri ike ịnye gị ngwaahịa dị elu yana ọrụ dị mma. Anyị nwere ndị otu njikwa njikwa raara onwe ya nye, site na imewe ngwaahịa, imepụta ebu, ịkpụzi na mgbakọ ngwaahịa, maka akụkụ na usoro ọ bụla na -anwale ma na -achịkwa nke ọma.
Anyị isi ngwaahịa na -agụnye: PUV akpụkpọ anụ, Pu akpụkpọ anụ, Microfiber leathers nke na -ọtụtụ -eji na oche oche mkpuchi, akpakanamde ime, ụgbọ ala ụzọ panel, wdg Bensen bụghị naanị nwere sara ìgwè nke anụ ụlọ ahịa ahịa, ma na -exported na Europe, USA, kamakwa ebupụ ya na mba Eshia. Na agbanyeghị nke ahụ, anyị na -ewepụtakwa akpụkpọ anụ na -ete ime akwa, ihe mkpuchi mkpuchi oche oche, akwa ụgbọ ala na ihe ndị ọzọ. Anyị aghọọla ụlọ ọrụ na -eduga n'ọhịa akpụkpọ anụ sịntetik.
Azụmaahịa dabere na iwu steeti dị mkpa, ụkpụrụ na iwu nke njikwa WTO chọrọ dịka iwu siri dị, na -esonye na mmekorita akụ na ụba mpaghara, atụmanya azụmaahịa na ihe ọma, oge ọzọ, anyị ga -agbasawanye ọnụ ọgụgụ ọrụ yana nkwalite ọnọdụ akụ na ụba ụlọ ọrụ. , na -achọ ndị mmekọ, ezi nkwado imekọ ihe ọnụ na ịchọ mmepe.
N'okpuru ụkpụrụ nke imekọ ihe ọnụ, Bensen na-enye ihe dị elu, ihe dị mma yana ọrụ kacha mma, yana ọrụ maka mmekorita oge lona na ndị ahịa anyị niile.
Adress: Room 912, Floor 9th, Lujin Building, 14 Shangwu waihuan Rd, CBD Convention Center, Zhengzhou Mpaghara (zhengdong xinqu), Henan Plot mpaghara azụmaahịa efu.
Ajụjụ ọ bụla gbasara ihe dị n'ime ụgbọ ala na agba, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ m na ndị ọkachamara na -arụrụ gị ọrụ